हिमाल खबरपत्रिका | ग्यालेक्सी नोट–८ मा ‘बण्डलिङ अफर’
ग्यालेक्सी नोट–८ मा ‘बण्डलिङ अफर’
सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले ग्यालेक्सी नोट–८ मा बण्डलिङ अफर ल्याएको छ । अफरअन्तर्गत ग्यालेक्सी नोट–८ को खरीद गर्दा ग्राहकले सामसङको बटल स्पिकर, टुटफुट भएमा बीमाको सुविधा तथा एनसेल सँगको सहकार्यमा प्रत्येक महीना दुई जीबीका दरले आठ महीनासम्म प्रयोग गर्न सकिने गरिको १६ जीबीको फोर जी डाटा पाउने छन् ।
ग्यालेक्सी नोट–८ मासिक किस्ताबन्दीमा पनि किन्न सकिनेछ । नोट–८ मा इन्फिनिटी डिस्प्ले, एस–पेन, ट्रू डुअल क्यामेरालगायतका विशेषता रहेका छन् ।
यामाहाको ‘स्कूटर डे’
एमएडब्लूले नेपालमा यामाहा ‘स्कूटर डे’ मनाएको छ । उपभोक्तालाई स्वतन्त्र, आत्मविश्वासी र सशक्त बनाउन स्कूटरले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै यामाहाले ७ मार्च (२३ फागुन)मा ‘स्कूटर डे’ मनाएको हो । ‘स्कूटर डे’ को अवसरमा यामाहाले आफ्ना सबै सर्भिस सेन्टरबाट ‘फ्रि स्कूटर वास’ को अफर दिएको थियो ।
त्यस्तै ‘स्कूटर डे’ कै अवसरमा यामाहाको नेपालस्थित बिक्रेता एमएडब्लुले ट्राफिक प्रहरीलाई दुई वटा साइरन जडित स्कूटर हस्तान्तरण गरेको छ ।
५ र ६ चैतमा एचआर मिट
मानव जनशक्ति र व्यवस्थापन सेवामा काम गर्दै आएको ग्रोथ सेलर्स ले मानव संशाधनसम्बन्धी दुईदिने सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । मानव पूँजीको विकास र सशक्तिकरणका लागि ५ र ६ चैतमा होटल हयात् रिजेन्सीमा एचआर मिट गर्न लागिएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मोहन ओझाले जानकारी दिए । एचआर मिटको यो एघारौं संस्करणमा भारतको एसेन्चर मानव संशाधन विभागकी प्रबन्ध निर्देशक डा. तनया मिश्र र एशियन पेन्ट्स भारतका पूर्व मानव संशाधन विभाग प्रमुख एनएस अय्यर प्रमुख वक्ताका रुपमा रहनेछन् ।
‘एचआर क्यान चेन्ज, एचआर क्यान ड्राइभ’ भन्ने नारा सहित २५० जना भन्दा बढी सहभागी रहने कार्यक्रममा मानव संशाधनसम्बन्धी छलफल, अन्तर्वार्ता, गोष्ठीसहितका विभिन्न सत्रहरुको आयोजना गरिनेछ । मानव जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनले मात्रै प्रभावकारी कार्यसम्पादन र प्रतिफल आउने महत्व बुझाउन संस्थाले सन् २००८ देखि नियमित रूपमा एचआर मिट आयोजना गर्दै आएको प्रबन्ध निर्देशक ओझाले बताए ।
आईएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्धित ‘आईएमई डिजिटल’ र सिद्धार्थ ब्यांकबीच ‘आईएमई पे’ मोबाइल मनीमार्फत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । सम्झौतामा आईएमई डिजिटलका तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत डेनियल डी. श्रेष्ठ र सिद्धार्थ ब्यांक लिमिटेडको तर्फबाट भुक्तानी विभाग प्रमुख सुरेश महर्जनले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार सिद्धार्थ ब्यांक लिमिटेड ‘आईएमई डिजिटल’ को ब्यांकिङ साझेदार संस्था हुनेछ । जसअनुसार सिद्धार्थ ब्यांकले सेवाग्राहीलाई आईएमई पे वालेटमार्फत ब्यांक खाताबाट वालेट र वालेटबाट ब्यांक खातामा रकम जम्मा गर्ने जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्नेछ । त्यस्तै सिद्धार्थ ब्यांकका सेवाग्राहीहरुले ‘आईएमई पे’ मा उपलब्ध रिचार्ज र विभिन्न प्रकारका अनलाइन भुक्तानी सेवाका अतिरिक्त मनी ट्रान्सफर सम्बन्धी सुविधा पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले ललितपुरको पुल्चोकमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । २० फागुनमा कम्पनीका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । पुल्चोकसँगै कम्पनीका शाखा कार्यालय ३५ पुगेको छ । त्यस्तै चारवटा वैदेशिक रोजगार जीवन बीमा केन्द्रमार्फत सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
एभरेष्ट ब्यांकले १०८औं महिला दिवसको अवसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नर्भिक अस्पतालसँगको सहकार्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा २०० सर्वसाधारणले विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरहरुबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा लिएका थिए ।